Inona no olana telo volana taorian’ny fihetsiketsehana manohitra ny governemanta tany Bolgaria? · Global Voices teny Malagasy
Voarara tsy hiditra torapasiky ny daholobe ny lehiben'ny mpanohitra iray; mitaky fanovana ny olona
Voadika ny 28 Oktobra 2020 5:09 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Nederlands, Ελληνικά, Français, Español, English
Nanomboka ny hatezerana rehefa nanao ny morondranomasina ho an'ny daholobe ho fananany manokana ilay mpanao politika malaza iray ka niteraka fihetsiketsehana manerana ny firenena nitaky ny fanavaozana tanteraka ny rafitra politika izay heverina ho lò sy tsy mahomby.
Io no famoriam-bahoaka lehibe indrindra hita tany Bolgaria tao anatin'ny folo taona lasa izay – tany Sofia, ary nahasarika olona miisa 30.000 tamin'izay fotoana izay, araka ny tombatombana isankarazany. Nisy ihany koa ny hetsi-panoherana madinika kokoa nitranga tany amin'ireo tanàndehibe Bolgara hafa sy tany ivelany. Nampiseho ny valim -panadihadiana iray nataon'ny Sova Haris, orinasam-panadihadiana tsy miankina fa ny 70 isanjaton'ny olona miisa 1.000 izay nohadihadiana no nanohana ny fanoherana.
Nanomboka ny 7 jolay izany rehetra izany, rehefa nikasa hanangana sainam-pirenena tao Rosenec, morontsiraka misy zaridainan'ny daholobe iray ny mpitarika ny antoko mpanohitra Yes Bulgaria, Hristo Ivanov. Raha araka ny lalàna, tokony ho azon'ny Bolgara rehetra hidirana ny zaridainam-panjakana, ary notsapain'i Ivanov raha mbola manan-kery ny zony ao Rosenec.
Raha nandefa mivantana ny fitondrany ny sainam-pirenena tao amin'ny tambajotra sosialy izy dia nanatona ny morondranomasina tamin'ny alàlan'ny sambo, satria tsy nisy lalana misokatra mifandray amin'ilay faritra. Nanatona azy ny mpiambina raha vantany vao nanitsaka ilay morondranomasina izy. Natosik'izy ireo tao anaty rano i Ivanov rehefa avy nifamaly izy ireo.
Nanao fisafoana ny tranon'i Ahmed Dogan, ilay mpitarika hajaina ny Hetsika ho an'ny Zon'olombelona sy ny Fahalalahana (MRF), antoko politika misolo tena ny Tiorka vitsy an'isa ao Bolgaria ny mpiambina.
Mpiambina tao amin'ny sampandraharahan'ny fiarovam-pirenena teo aloha nandritra ny fotoana komonista, mbola olo-malaza amin'ny politika Bolgara ka hatramin'izao fotoana i Doğan. Hita fa mpiara-dia akaiky amin'ny Praiminisitra Boyko Borisov izy, ary miantso azy hoe “marary aotra amin'ny tsifisian-dalàna ao Bolgaria” i Hristov.
Nivadika ny toe-draharaha rehefa nanome baiko hanaovana bemidina ny biraon'ny filoham-pirenena ny Lehiben'ny Fampanoavana Ivan Geshev izay heverina fa valifaty noho ny tenin'ny filoha Rumen Radev nanameloka ny fibodoana manokana ny morondranomasina Rosenec. Fantatra fa mpiara-dia akaiky amin'i Dogan i Geshev, raha mpitsikera ampahibemaso ny governemanta kosa i Radev, avy amin'ny antoko mpanohitra Sosialista Bolgara (BSP).
Tamin'ny taona 2013, nipoaka ny hetsi-panoherana nanerana an'i Bolgaria taorian'ny resabe tamin'ny fanendrena an'i Delyan Peevski ho lasa lehiben'ny Masoivohon'ny Fiarovam-panjakana. Nofoanana ny fanendrena an'i Peevski taty aoriana, saingy mbola malaza ho manan-danja izy teo amin'ny fampitam-baovao. Voalaza fa manana rohy mifandray amin'ny mafia Bolgara izy izay lalipaka amin'ireo andrim-panjakana Bolgara.